Loc-OS နှင့် Cereus Linux: antiX နှင့် MX | အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများ Linux မှ
Loc-OS နှင့် Cereus Linux: antiX နှင့် MX ၏အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများ
ငါတို့ကိုနေ့တိုင်းဖတ်တဲ့သူအတော်များများကငါတို့သုံးလေ့ရှိတဲ့အရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့အတွက်အဲဒါကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ် လွတ်လပ်သောတုံ့ပြန်မှု ဖန်တီးသည် MX Linux ကို 19 ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများမရ။ ရည်ရွယ်ချက် (သို့) ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိသည့်အနက်ဖြစ်ခြင်း ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများ (64 Bit) အတွက်စံပြအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်များစွာ
ထိုအချိန်မှစ။ "အံ့ဖွယ်" ၀ င်ငွေနည်းအသင်းများအတွက်လာမည်မဟုတ်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အခြားသူများအားအသိပေးလိုသည် လွတ်လပ်သောအနားယူမှု ၂ ခုသူတို့က ၀ င်ငွေနည်းအသင်းတွေအတွက်၊ သူတို့ရဲ့နာမည်တွေပဲ "Loc-OS" y "Cereus Linux"
1 antiX နှင့် MX Linux ၏ Respines များအကြောင်း
2 Loc-OS နှင့် Cereus Linux: အရင်းအမြစ်နည်းကွန်ပျူတာများအတွက်တုံ့ပြန်မှုများ
2.1 အဘယ်ကြောင့် Respin နှင့်ပုံမှန် Distro မဟုတ်သနည်း။
2.2 Loc-OS ဆိုတာဘာလဲ။
2.3 Cereus Linux ဆိုတာဘာလဲ။
antiX နှင့် MX Linux ၏ Respines များအကြောင်း
ငါလက်ျာဘက်အပေါ်ခုန်မီ "Loc-OS" y "Cereus Linux"ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်သူများအတွက်၊ ၎င်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် ပြန်စပါ။ သူကဘာလဲ MilagrOS ကိုပြန်သုံးပါငါတို့သည်ဤသဘောတရားများကိုချက်ခြင်းအောက်တွင်ချန်ထားပြီး၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောယခင်ထုတ်ဝေမှုအချို့သို့လင့်ခ်အချို့ကိုထားခဲ့လိမ့်မည်။
"Respin၊ bootable (တိုက်ရိုက်) နှင့် install လုပ်နိုင်သော ISO image ကိုအခြားအသုံးပြုမှုများအကြားပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရန်သုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကို ISO (သို့) ရှိပြီးသား GNU / Linux Distro တပ်ဆင်ခြင်းမှတည်ဆောက်သည်။ MX Linux ကိစ္စတွင် MX ရည်ရွယ်ချက်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်စံပြကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး "Remastersys and Systemback" ကဲ့သို့အခြားအဟောင်းကိရိယာများအတွက်ခေတ်မီပြီးထိရောက်သောအစားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း MX Linux တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။" MX လျှပ်တစ်ပြက် - ကိုယ်ပိုင်နှင့်တပ်ဆင်နိုင်သော MX Linux Respin ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
မှတ်ချက်: antiX တွင်ကိုယ်ပိုင် Snapshot tool လည်းရှိသည်။
"MilagrOS GNU / Linux သည် MX-Linux Distro ၏တရား ၀ င်ထုတ်ဝေမှု (Respin) ဖြစ်သည်။ 64-bit ကွန်ပျူတာများ၊ အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျခြင်း၊ အဟောင်းနှစ်မျိုးလုံးအပြင်ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပြီး GNU / Linux နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ရယူပြီး (ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး) သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အခြားအရာများကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်။". GNU / Linux အံ့ဖွယ်အမှုများ - respin အသစ်ရရှိနိုင်သည်။ Respines သို့မဟုတ် Distros?
မှတ်ချက်: ဤ Respin ကို the မှတီထွင်သည် Tic Tac Project ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါတို့ကိုတိုက်ရိုက်စူးစမ်းနိုင်သည် link ကို.
Loc-OS နှင့် Cereus Linux: အရင်းအမြစ်နည်းကွန်ပျူတာများအတွက်တုံ့ပြန်မှုများ
အဘယ်ကြောင့် Respin နှင့်ပုံမှန် Distro မဟုတ်သနည်း။
၎င်းတို့အားအများအားဖြင့်အသည်းကွဲ။ အတွေ့အကြုံရှိ Linuxeros တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်စုပေါင်းအားဖြင့်၎င်းအားလူထုမှသိရှိပြီးအသုံးပြုသော GNU / Linux Distro ကို အခြေခံ၍ သီးခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဖန်တီးသည်။ ဤအထူးအခြေအနေများတွင် GNU / Linux antiX နှင့် MX Distros
သူတို့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လူသိများလေ့မရှိသော Linux အသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်အုပ်စုများကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသေချာသောခံစားချက်ကိုပေးသည်။
အဆိုပါအညီ "Loc-OS" ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဤလွတ်လပ်သော Respin ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"၎င်းသည်ဘရာဇီးတွင်နေထိုင်သော Urugayo မှဖန်တီးသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြန့်ဖြူးမှုသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ့ပါးပြီးပြီးပြည့်စုံသော distro တစ်ခုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေသောကိရိယာများကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်ခြင်း။ အထူးသဖြင့် RAM 32GB ရှိသောကွန်ပျူတာများအတွက် 1-bit ဗားရှင်းရှိပါသည်၊ အထူးသဖြင့် RAM 64GB နှင့်အထက်ရှိသောစက်များအတွက်
လူများစွာသည်အရင်းအမြစ်အလွန်နည်းသော PC ရှိနေပြီး Loc-Os Linux ဖြင့်၎င်းကိုလျှပ်စစ်စွန့်ပစ်မှုမဖြစ်ခင်၎င်းအားအခြားအခွင့်အလမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ Loc-OS သည်“ Linux from scratch” distro မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် Antix 19.4 ၏ပြုပြင်မွမ်းမံမှု (re-spin) ဖြစ်သည်။ Antix သည် Debian ကိုအခြေခံသည်၊ ထို့ကြောင့် Loc-OS သည် LXDE နှင့်အပြည့်အ ၀ လုပ်ဆောင်နိုင်သော Debian 10 Buster ကို၎င်း၏ဗဟိုတွင်ရှိသည်။"
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "Loc-OS"သူ့အပြင် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် link ကို အမှီအခိုကင်းသော Respin Developer မှတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသောနောက်ထပ်အချက်အလက်များစွာနှင့်
Cereus Linux ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ Cereus Linux ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက် ဤလွတ်လပ်သော Respin ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
"Cereus Linux သည် MX Linux & Debian 10 Buster (respin) အတွက် XFCE desktop environment နှင့် kernel 4.19.0-12-686-pae ကို အခြေခံ၍ Operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ bit ကွန်ပျူတာများ ထို့အပြင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူအတွက်တစ်နေ့တာအတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောပရိုဂရမ်များ၊ ရေရှည်အထောက်အပံ့များနှင့်အတူခိုင်မာသောအခြေခံတစ်ခုပါ ၀ င်သော user များအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သော operating system တစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Hardware အတွက်အလယ်အလတ် / နိမ့်သောလိုအပ်ချက်ရှိသော operating system တစ်ခုဖြစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်သည်၎င်းတို့အားဒုတိယဘ ၀ ကို ပေး၍ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေရန် 32-bit ကွန်ပျူတာများအတွက်တိုးချဲ့ထောက်ခံမှု (LTS / ESR) ပါ ၀ င်သောနောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဂရမ်များ၊ ဆော့ဝဲများသို့မဟုတ်ဆော့ဝဲဗားရှင်းများကိုပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Cereus Linux တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော office suite package (မပါ) ပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။"
ပိုမိုသိရှိလိုပါက "Cereus Linux"သူ့အပြင် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် link ကို အမှီအခိုကင်းသော Respin Developer မှတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးသောနောက်ထပ်အချက်အလက်များစွာနှင့်
တိုတိုပြောရရင် "Loc-OS" y "Cereus Linux" သား လွတ်လပ်သောအနားယူမှု ၂ ခု အများစုအတွက်အသုံးဝင်စေရန်ဖန်တီးခဲ့သည် အရင်းအမြစ်နိမ့်သို့မဟုတ်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေသောပစ္စည်းမရ။ လူအုပ်စုများ၊ နိုင်ငံအချို့အတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ အားလုံးထက်၊ စီစဉ်ထားသောအရွယ်မတိုင်မီသက်ရောက်မှုများကိုလျော့ပါးစေသည် ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများစွာမှ ခေတ်သစ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း၊ ပိတ်ထားသောနှင့်စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်အသုံးချမှုများနှင့်ခေတ်သစ် GNU / Linux Distros အချို့နှင့်မကိုက်ညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Loc-OS နှင့် Cereus Linux: antiX နှင့် MX ၏အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများ
မင်္ဂလာပါ၊ Debianuser မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါအသက်ရှုသံများသည်အလွန်တိကျသောအသုံးပြုသူများအတွက်လက်တစ်ဆုပ်စာအတွက်အလွန်ရည်ရွယ်ချက်ကြီးသောသေးငယ်ပြီးနှိမ့်ချသောအခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းတို့သည်မည်သည့် GNU / Linux Distro တွင်မဆိုလုံးဝသို့မဟုတ်သေချာသောအစားထိုးအဖြေမဟုတ်ပါ၊ Debian, Ubuntu, Mint သို့မဟုတ် Bunsenlabs ကဲ့သို့ကြီးမားသော Distros များအတွက်ပင်နည်းသည်။
သုံးသပ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အထိငါအရမ်းကျိုးနွံတဲ့အရင်းအမြစ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီး Devuan ဟာ Openbox တစ်ခုနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Loc-Os ရဲ့ screenshot ကိုကြည့်ပြီး (အဲဒါက Antix-Systemd- မပါဘဲ) ကနေဆင်းသက်လာတာကိုသတိပြုပါ။ ၎င်းသည်ကြိုးစားလိမ့်မည်၊ တိုင်းပြည်၏စုစည်းမှုမှလာခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ Paisa မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကမင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော်တော်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
CopyQ 4.1.0: အဆင့်မြင့်ကလစ်ဘုတ်မန်နေဂျာမှာဘာအသစ်လဲ
Cockpit: server စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် web interface နှင့် application